(Faallo): Xikmadda Mooshin-jecelka iyo Khatarta Qaran ee ka dhalan karto !!! – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(Faallo): Xikmadda Mooshin-jecelka iyo Khatarta Qaran ee ka dhalan karto !!!
Siyaasi kasta oo dareen Waddanimo leh, waxa uu garwaaqsaday in aysan Aragti habboon ahayn in xilligan la dhoodhoobo Mooshin lagu doonayey in lagu abuuro Qalalaase Siyaasadeed iyo Marin-habaabin khatar laga dhaxli karo.
Calaw-siyaasadeed baana la dareemay muddadii ay Xildhibaanadda sheegeen inay Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, u gudbiyeen Guddoonka Barlamaanka.
Tiradda Xildhibaanadda la sheegay inay saxiixeen Mooshinkaasi oo u badan Xildhibanaadda mashruuca ka dhigtay Mashruuca Mooshin-jecelka ayaa u muuqda kuwo aan ka baaraan deign maxsuulka ka soo bixi kara Mooshinka ay iclaamiyeen.
Waa hubaal in ay Xildhibaanaddu sababo dahsoon u cuskadeen Eedeymaha ku sidkan Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Dowladda Federalka, waxaana muuqata in laga dareemayo Mooshin lagu degdegay amaba laga leeyahay ujeedooyin ay ku doonayaan in la af-garto iyo Gorgortan Siyaasadeed, Xil, Maamul iyo xaallado kale oo lagu soo koobi karo Jiilaalka Siyaasadeed.
Wareysiyadda ay Xildhibaanadda Mooshin-jecelka bixiyeen marka loo kuur galo waxay u muuqdaan inay cuskadeen Qoddobo aan loo haynin qiil dhamaystiran oo uu ansax ku noqon karo Mooshinkooda.
Waxaa hubaal inay cuskadeen qoddobo ka baxsan Xadkooda, isla markaana ay Farageliyeen Hawl loo idmaday Hay’addo Qaran.
Tusaale ahaan, Arrinta Ciiddamadda iyo Mushaarkooda waxaa mas’uul ka ah Wasaaradda Difaaca iyo Hoggaanka Ciiddamada Qaranka, marka ma muuqato sababo ay Xildhibaanadda ugu il-duufaan Sharciga, mar hadday iyagu ku magacaaban yihiin Sharci-dejiyayaal Qaran.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan haddii ay Xildhibaanadaasi wehel u noqdeen Daruufaha Jiilaalka Siyaasadeed, kuna daaleen Kuraasta Barlamaanka inay leeyihiin Garowshiyo muuqata.
Haddiise ay Xildhibaanaddu ka tahay Mooshinka Isbaaro-siyaasadeed, waxay taasi muujin karta inay ku turunturoodeen Masraxa Siyaasadda Qaranka, isla markaana aysaan rajo dambe ka lahayn in lagu aamino Xil Qaran.
Xildhibaanadda u ololeynayo Moshinka ka dhanka Madaxweynaha, waxay u muuqdaan kuwo aan ka baaraan deign Istaraatijiyadda noocaasi ah iyo Dayaca Danaha Qaranka ee ka dhalan karta haddii ay ku guuleystaan inay Madaxweynaha casilaan.
Waxtar Siyaasadeed kama dhalan karto haddii ay Xildhibaanaddaasi ku adkeystaan in lagu taageero in Madaxweynaha la casilo, waana hubaal inay dhaqan siyaasadeed ka dhigtaan Mooshin-jecelka ilaa ay hawlgab ka noqdaan Mudanayaasha Barlamaanka.
Si kastaba ha ahaatee, Halbeeg kasta oo la saaro Xikmadda Xildhibaanadda Mooshin-jecelka waxaa la dhihi karaa waxay u muuqdaan kuwo ku adkaysanayo Danahooda Khaaska ee ku dhisan Cad-yahow ku cunay ama ku ciideeyey oo kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu baaqay Baarlamanka iyo Xukuumadda inay dardar geliyaan hawlaha qaranka’
Maalinta Aadminimadda Caalamka ee World Humanitarian Day oo maanta loo dabaal-degayo